Nei Mwari Akasika Nyika? | Mashoko Akanaka
1. Nei Mwari akasika nyika?
Mwari akapa vanhu nyika. Ndiyo musha wedu. Saka vanhu vaviri vekutanga Adhamu naEvha havana kusikirwa kuti vagare kudenga. Mwari akazovasika atosika ngirozi kuti dzigare kudenga. (Jobho 38:4, 7) Mwari paakasika munhu wekutanga akamugarisa muparadhiso yakanaka chaizvo yainzi munda weEdheni. (Genesisi 2:15-17) Jehovha aida kuti Adhamu nevana vaaizobereka vararame nekusingaperi panyika vachifara.​—Verenga Pisarema 37:29; 115:16.
Panyika pese, munda weEdheni chete ndiwo waiva paradhiso. Vanhu vaviri vekutanga vaifanira kubereka vana, vozadza nyika. Nekufamba kwenguva, vaifanira kuita kuti nyika yese ive paradhiso. (Genesisi 1:28) Nyika haizombofi yakaparadzwa. Icharamba iri musha wevanhu nekusingaperi.​—Verenga Pisarema 104:5.
Ona vhidhiyo inonzi Mwari Akasikirei Nyika?
2. Nei nyika isiri paradhiso?
Adhamu naEvha havana kuteerera Mwari saka Jehovha akavabudisa mumunda weEdheni. Saka vanhu vakabviswa muparadhiso uye hapana akazokwanisa kuita kuti nyika ive paradhiso. Bhaibheri rinoti: “Nyika yakaiswa mumaoko evakaipa.”​—Jobho 9:24.​—Verenga Genesisi 3:23, 24.
Saka zvinoreva here kuti Jehovha akachinja chinangwa chake chaakasikira vanhu? Aiwa! NdiMwari Wemasimbaose. Hapana chaanotadza kuita. (Isaya 45:18) Achaita kuti vanhu vararame sezvaaida pakutanga.​—Verenga Pisarema 37:11, 34.
3. Nyika ichava sei Paradhiso?
Nyika ichava paradhiso Jesu paachange achitonga saMambo akagadzwa naMwari. Jesu achaparadza vese vasingadi kuteerera Mwari achibatsirwa nengirozi. Achaita izvi muhondo inonzi Amagedhoni. Jesu achabva aisa Satani muusungwa kwemakore 1 000. Vanhu vaMwari vachapona nekuti Jesu achange achivatungamirira uye achivachengetedza. Vachararama nekusingaperi muParadhiso pasi pano vachifara.​—Verenga Zvakazarurwa 20:1-3; 21:3, 4.
4. Kutambura kuchapera riini?
Mwari achabvisa riini zvakaipa zvese panyika? Jesu akazivisa “chiratidzo” chaizobatsira vanhu kuti vazive kuti mugumo wava pedyo. Zvinhu zviri kuitika panyika izvo zvinogona kuita kuti vanhu vaparare, zvinoratidza kuti “nyika yava kumagumo kwayo.”​—Verenga Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.
Jesu paanenge achitonga nyika kwemakore 1 000 ari kudenga, achaita kuti kutambura kwese kupere. (Isaya 9:6, 7; 11:9) Panguva yaanenge achitonga, Jesu achange ariwo Mupristi Mukuru uye achaita kuti vanhu vanoda Mwari varegererwe zvivi zvavo. Saka Mwari achaita kuti zvirwere, nekuchembera nerufu zvipere achishandisa Jesu.​—Verenga Isaya 25:8; 33:24.
5. Ndivanaani vachagara muParadhiso?
PaImba yeUmambo uchaona vanhu vanoda Mwari uye vanoda kudzidza kuti vangaita sei kuti vamufadze
Vanhu vanoteerera Mwari ndivo vachagara muParadhiso. (1 Johani 2:17) Jesu akaudza vateveri vake kuti vaende kunotsvaga vanhu vanyoro vovadzidzisa zvavanofanira kuita kuti vafarirwe naMwari. Iye zvino Jehovha ari kubatsira mamiriyoni evanhu kuti agadzirire kuzorarama muParadhiso panyika. (Zefaniya 2:3) PaDzimba dzeUmambo dzeZvapupu zvaJehovha, vanhu vanodzidziswa kuti vave varume uye vanababa vakanaka uye vakadzi vanodzidziswa kuti vave madzimai navanaamai vakanaka. Vabereki nevana vanonamata pamwe chete vachidzidziswa kuti vangabatsirwa sei nemashoko akanaka.​—Verenga Mika 4:1-4.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Akasikirei Nyika?